လူမှုဗေဒ သဘောထားနှင့် LGBT | Colors Rainbow
August 10, 2017 April 23, 2018 admin 988 Views0Comments Wyne	min read
လိင်တူချစ်သူများအပေါ် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အမြင်တွေဟာ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ မတူညီတဲ့ သမိုင်းဖြတ်သန်းမှုတွေအပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြပါတယ်။
အတိတ်ကာလ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံအတော်များများမှာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားပေးနိုင်တဲ့ လိင်မှု (ဖိုမဆက်ဆံရေး) ကို စံတစ်ခုအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ဘာသာရေး ဂိုဏ်းတွေ အထူးသဖြင့် အေဗရာဟမ်ဓလေ့ လွှမ်းမိုးတဲ့ ဂိုဏ်းတွေမှာ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အပြစ်ပေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူနေမှု ဘဝတွေ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာပြီးနောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများစုမှာတော့ LGBT များအတွက် အခွင့်အရေးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ရရှိလာကြတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွေကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို လျော့ကျစေတဲ့ ဥပဒေတွေ ထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့ တခြားအခွင့်အရေးတွေ တိုးမြှင့်ရရှိလာတာဟာ LGBT များအတွက် အားတက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇ဝ လောက်ကတည်းက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများမှာ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်မှုတွေကို လက်ခံခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် The Pew Research Centre ရဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ သဘောထားတွေကို လေ့လာထားတဲ့ လေ့လာချက်မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
“မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပနိုင်ငံများ၊ လက်တင်အမေရိကအများစုနဲ့ အာရှနေရာတွေမှာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက လိင်တူချစ်သူတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံ အသိအမှတ် ပြုလာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း လိင်တူချစ်သူတွေကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချကန့်ကွက်တဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွေကတော့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများ၊ ရုရှား၊ အာဖရိကနဲ့ အာရှဒေသက နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်”
လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြထားတာက “လူတွေရဲ့ဘဝတွေအပေါ် ဘာသာတရားကြီးစိုးမှုနည်းတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေက လိင်တူချစ်သူတွေကို ပိုလက်ခံကြပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျပြီး ဘာသာတရား သက်ရောက်မှုများတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကတော့ လက်ခံမှု နည်းပါတယ်။ Gender အရ ကွဲပြားမှုနည်းတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာကျတော့ အမျိုးသမီးတွေကတောင် အမျိုးသားတွေထက် လိင်တူချစ်သူတွေကို ပိုမိုလက်ခံကြပါတယ်။”
အခြားသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှာတော့ လိင်တူချစ်ခင်သူတွေကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံခြင်းနဲ့ သဘောမတူ လက်မခံခြင်းတွေဟာ အမျိုးမျိုးသော လူဦးရေကွဲပြားမှု၊ စိတ်အခြေအနေနဲ့ လူမှုရေး အခြေအနေတွေဟာ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှုတွေ ရှိပါတယ်လို့ ဖော်ပြကြပါတယ်။
အမေရိကနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်မှုကို အကောင်းမြင် လက်ခံကြသူတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပညာတတ် လူဖြူမိန်းမပျိုတွေ၊ လစ်ဘရယ်နိုင်ငံရေး ဝါဒရှိသူတွေနဲ့ ဘာသာရေးအရ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက လိင်တူတွေအပေါ် အကောင်းမြင်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးတွေဟာ Gay တွေနဲ့ Lesbian တွေကို အကောင်းဘက်က လက်ခံရှုမြင်ပုံချင်း တူပြီးတော့ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်မှုကို လက်ခံတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာတော့ Gay တွေထက် Lesbian တွေကို ပိုပြီး အကောင်းမြင်တတ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူမှုရေးရာ စိတ်ပညာရှင် Gregory Herek (၁၉၈၄) ရဲ့ စာတမ်းတစ်ခုမှာတော့ လိင်တူချစ်ခြင်းကို မနှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ Gay နဲ့ Lesbian တွေကို မခွဲခြားဘဲ မုန်းတီးတတ်ကြတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကျတော့ Lesbian တွေကို အကောင်းမြင်တတ်ပြီး Gay တွေအပေါ်မှာတော့ သဘောထား မကောင်းဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ အာဖရိကန်-အမေရိကန်သွေးနှော လူမျိုးတွေဟာ ဥရောပသား သို့မဟုတ် စပိန်-အမေရိကန် သွေးနှောလူမျိုးတွေထက် ပိုပြီး လိင်တူဆက်ဆံမှုကို လက်မခံကြပါဘူး။ သို့သော်လည်း သမ္မတ အိုဘားမား လက်ထက်မှာတော့ အာဖရိကန်-အမေရိကန်လူမျိုးတွေကြားမှာ လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် သဘောထားတာတွေဟာ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ တောင်အမေရိကသားတွေကြားမှာ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ လူဖြူတွေကြားမှာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး တိုးမြှင့်လက်ခံလာကြပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာတော့ အစ္စရေးတွေဟာ လိင်တူချစ်သူတွေကို လက်ခံမှု အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း အစ္စရေးဥပဒေတွေ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းတွေကလည်း အတားအဆီးအဖြစ် ရှိနေပြန်ပါတယ်။
လိင်တူဆက်ဆံမှုအပေါ် တရားဥပဒေအခြေအနေဟာလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအလိုက် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော လူငယ်တွေအချင်းချင်း လိင်တူဆက်ဆံမှုဟာ တရားမဝင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၅၉ နိုင်ငံထဲမှ နိုင်ငံ ၇ဝ က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တချို့ဖြစ်ရပ်တွေမှာ လိင်တူချစ်သူတွေဟာ လူမှုရေးရာကိစ္စတွေကို ချိုးဖောက်သူတွေ (လူမှုလိင်) သဘာဝကို ဆန့်ကျင်သူတွေအဖြစ် တရားစွဲဆို အပြစ်ပေးခံရတာတွေ ရှိပါတယ်။
လိင်တူချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဟာလည်း တရားဥပဒေအရ အသိအမှတ်ပြုမှုဟာ နိုင်ငံတွေအလိုက် ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပါသေးတယ်။ လိင်တူချစ်သူ စုံတွဲတွေအတွက် မိဘအဖြစ် ထိန်းကျောင်းခွင့်၊ ကလေးမွေးစားခွင့်၊ (နည်းပညာ အကူအညီဖြင့်) ကလေးယူခွင့်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခွင့်အရေများ၊ လူနေမှုဘဝ လုံခြုံရေးစတဲ့ အရာတွေ လိုအပ်လျက် ရှိပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် တရားဥပဒေအရ အသိအမှတ်ပြုတာမျိုး မရှိတဲ့အခါမှာ တရားဥပဒေအရ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေ ခွဲဝေမှုအပေါ်မှာ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မရရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာ နယ်သာလိုင်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံး လိင်တူချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကို လက်ခံတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံ (၂ဝဝ၃)၊ စပိန်နဲ့ ကနေဒါ (၂ဝဝ၅)၊ တောင်အာဖရိက (၂ဝဝ၆)၊ နော်ဝေနဲ့ ဆွီဒင် (၂ဝဝ၉)၊ ပေါ်တူဂီ၊ အိုက်စလန်၊ အာဂျင်တီးနား (၂ဝ၁ဝ)၊ ဒိန်းမတ် (၂ဝ၁၂)၊ ဘရာဇီးလ်၊ ပြင်သစ်၊ ဥရုဂွေး၊ နယူးဇီလန် (၂ဝ၁၃)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (၂ဝ၁၅)၊ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ လူဇင်ဘတ်စ် (၂ဝ၁၅) စသဖြင့် လိင်တူချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
လိင်တူချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွေအပေါ် နိုင်ငံအလိုက် အသိအမှတ်ပြုလာတာတွေ ရှိသလို တစ်ဖက်မှာလည်း Shari’a Law လို့ ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ လိင်တူဆက်ဆံသူတွေကို သေဒဏ်အဖြစ် အပြစ်စီရင်တဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အထိ Shari’a Law ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘရူးနိုင်း၊ ဆူဒန်၊ အီရန်၊ ဆော်ဒီအာရေဘီးယား၊ ယီမန်၊ မြောက်နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ မောရတေးနီးယား၊ ကာတာနဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပေမယ့် လိင်တူဆက်ဆံမှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် မသတ်မှတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအပါအဝင် တူရကီ၊ အီရတ်၊ ဂျော်ဒန်၊ ဘာရိန်း၊ တာဂျီကစ္စတန်၊ ကိုဆိုဗို၊ အယ်ဘေးနီးယား၊ ကာဇက်စ္စတန်စတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေရဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာသမားများဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် လိင်တူချင်း ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို သဘောမတူကြပါဘူး။ သဘောတူ လက်ခံပေးတဲ့သူတွေကျတော့ လက်ခံရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေက ဘယ်လိုတွေပါဆိုတာ အထောက်အထားပြရင်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ငြင်းခုံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ကြပါတယ်။
အေဗရာဟမ်ဘာသာတွေဖြစ်တဲ့ ဂျူး၊ အစ္စလာမ်တွေနဲ့အတူ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ လိင်တူချင်း နှစ်သက်မှုကို ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ တားမြစ်တဲ့အပြင် အပြစ်ရှိတဲ့ အပြုအမူအဖြစ် သင်ကြားကြပါတယ်။
Indic ဘာသာများ သို့မဟုတ် Dharmic ဘာသာတွေဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ဂျိမ်းဝါဒ(Jainism) နဲ့ ဆစ်ခ်အယူဝါဒ (Sikhism) တွေမှာတော့ လိင်တူချင်း နှစ်သက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ကြားဖော်ပြမှုတွေဟာ ရှင်းလင်းမှု နည်းပါးပါတယ်။ အနောက်တိုင်းက ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာတွေနဲ့ မတူတာကတော့ လိင်တူချင်း နှစ်သက်တာကို အရှေ့တိုင်း ဘာသာရေးတွေမှာ ဆွေးနွေးမှု နည်းပါးတာပါပဲ။ သို့သော်လည်း ဒီအကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါ မျက်မှောက်ခေတ် Dharmic ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဆိုးမြင်တတ်ပြီး လိင်တူချင်း နှစ်သက်တာကို တားမြစ်ကြပါတယ်။ ရှေးအလွန်ကျတဲ့ ဘာသာရေးကျမ်းတွေမှာ ယောက်ျားမဟုတ်၊ မိန်းမမဟုတ်သောသူများကို တတိယလိင်အဖြစ် ဖော်ပြထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- ခရစ်တော်မပေါ်မီ 1500 BCE- 600 BCE တွေမှာ Vedas လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေး မှတ်တမ်းတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော လူများကတော့ တတိယလိင်ဆိုတာ ယနေ့ခေတ် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ LGBT တွေနဲ့ အတူတူဆိုပြီး ရှုမြင်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တတိယလိင်ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်တဲ့အခါ သို့မဟုတ် တတိယလိင်ကို ပုံဖော်တဲ့အခါ ရှေးဟောင်းဘာသာရေးကျမ်းတွေမှာ မကောင်းတဲ့သဘောကို ဖော်ပြကြပါတယ်။
တစ်ရာစုလောက် ရှေးကျတဲ့ ဟိန္ဒူကျမ်းတွေမှာ အမျိုးသမီးအင်္ဂါနဲ့ မဟုတ်သော လိင်ဆက်ဆံမှုဟာ မသန့်စင်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ တရုတ်ရှေးရိုးရာ ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေထဲမှာလည်း လိင်တူချင်း နှစ်သက်တာကို စိတ်ပျက်စရာအဖြစ် ဖော်ပြကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေကတော့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ရှိနေဆဲဆိုတာတော့ ငြင်းမရတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Herek ရဲ့ ATLG (Attitude towards Lesbians and Gay Men Scale in Psychology) မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့…
“Lesbian နဲ့ Gay တွေအပေါ် အဆိုးမြင်သဘောထားတွေဟာ ဘာသာတရား ကြီးစိုးမှုနဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ အဆိုးမြင်တဲ့သူတွေဟာ Gay တွေ၊ Lesbian တွေနဲ့ ပတ်သက်မှု မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ လိင်ကဏ္ဍကို အစဉ်အလာအတိုင်း စွဲမြဲစွာ လက်ခံသူတွေဖြစ်ပြီး မိရိုးဖလာ အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတွေကို တရားသေ ယုံကြည်ထားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်”
လိင်တူချစ်သူတွေကို ခရစ်ယာန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Alliance Defense Fund ကတော့ “လိင်တူနှစ်သက်သူတွေရဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကို စာသင်ခန်း၊ အစိုးရပိုင်ခန်းမများ၊ သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့ နေရာတွေလိုမျိုးမှာ တားမြစ်သင့်ပါတယ်။ လိင်တူနှစ်သက်သူတွေဟာ ဘယ်သူတွေမှာမှ မရှိတဲ့ သူတိုရဲ့ အထူးအခွင့်အရေးကို အသနားခံ တောင်းဆိုနေကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ မိသားစုဆိုတဲ့ သဘောတရားကို ဆန်းသစ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို တောင့်တနေကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကို တားမြစ်ပိတ်ပင် အပြစ်ပေး အရေးယူမှုတွေ လုပ်သင့်တယ်”
ဒီဖော်ပြချက်အရ ဘာသာရေး ရှေးရိုးစွဲအမြင်ရှိသူတွေဟာ လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် မကောင်းတဲ့ သဘောထား ရှိပါတယ်။ ဒီလို သဘောထားရှိတာတွေဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် လက်ခံတဲ့အမြင် ရှိသူတွေကျတော့ အပြစ်သားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ တည်ရှိပြီး မိသားစုပုံစံနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ပုံစံတွေကို လျော့ကျနည်းပါးအောင် လုပ်ဆောင်သူတွေလို့ အမြင်ခံကြရပါတယ်။
ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတွေရဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေ တန်ဖိုးထားမှုတွေဟာ ယနေ့ထိတိုင် မပြောင်းမလဲ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာလည်း ခဲယဉ်းပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက လူမှုရေးအရ လက်ခံဖို့နဲ့ တရားဥပဒေအရ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိဖို့ဆိုတာ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီများတဲ့ လူမှုနယ်ပယ်တွေမှာ ပိုပြီး အားစိုက်ထုတ်ကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“The Global Divide on Homosexuality” Pew Research Center4June 2013 Retrieved 8 December 2014
Herek, G.M (1994) “Assessing heterosexuals’ attitudes toward lesbians and gay men”. In B. Greene and G. M. Herek (Eds) Psychological perspectives on lesbian and gay issues: Vol. 1 Lesbian and Gay psychology: theory, research, and clinical applications. Thousands Oaks, California: Sage.
← လိင်တူချစ်သူများအပေါ် မုန်းတီးသည့် အယူအဆ အစပျိုးခဲ့ပုံ သမိုင်းကြောင်း (အပိုင်း ၁)
လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် သမိုင်းဝင် နေ့တစ်နေ့နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာများ →
တတိယလိင်၏ သမိုင်းကြောင်းများကို လေ့လာခြင်း